Sida loo Bilaabo Ganacsi daadinta | Martech Zone
Sannadihii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan ganacsatada ama shirkadaha doonaya inay dhisaan ganacsi ecommerce. Toban sano ka hor, bilaabida meheradda ecommerce, isku-darka habka lacag bixinta, xisaabinta heerarka canshuuraha maxalliga, gobolka, iyo heer qaran, dhisida otomaatiyada suuq-geynta, isku-darka bixiyeyaasha maraakiibta, iyo keenista mashiinkaaga saadka si aad uga guurto alaabta iibka illaa gaarsiinta waxay qaadatay bilooyin. iyo boqolaal kun oo doolar.
Hadda, ka furitaanka goob ku taal barxadda ganacsiga sida Soo iibso or BigCommerce lagu fulin karaa saacado halkii bilooyin. Intooda badani waxay leeyihiin ikhtiyaarrada wax-soo-saarka lacag-bixinta oo isla markiiba la dhisay. Iyo aaladaha is-gaarsiinta suuq-geynta casriga ah sida Klaviyo, Omnisend, ama Moosend si sax ah u xir batoonka guji mooyee.
Waa maxay Cabbir-dhimis?
Dropshipping waa qaab ganacsi oo adiga, tafaariiqlehu, aadan u baahnayn inaad keydiso ama xamili karto saamiyo kasta. Macaamiishu waxay alaabta ku dalbaan dukaankaaga internetka, oo waxaad u digaysaa alaab -qeybiyahaaga. Iyaga ayaa markooda ka baaraandegaya, baakadeeya, oo alaabta si toos ah ugu diraya macaamilka.
Suuqa daadinta adduunka ayaa ku socda mid kasta oo ku dhow $ 150 bilyan sannadkan waana inuu ka badan yahay saddex laab 5 sano gudahood. 27% tafaariiqda websaydhka ayaa u gudbay inay hoos u dhigaan markabka qaabkooda aasaasiga ah ee fulinta fulintooda. Ma aha in la xuso 34% ee iibka Amazon ayaa lagu fuliyay iyadoo la adeegsanayo daadiyaha tobankii sano ee la soo dhaafay!
Iyada oo dhufto ee daadinta sida Daabacaad, tusaale ahaan, waxaad bilaabi kartaa qaabeynta iyo iibinta alaabada isla markiiba. Looma baahna in lala macaamilo saamiyada, ama laga walwalo wax soo saarka business meheraddaada daadinta ah waa adigu oo keliya maareynta, hagaajinta, iyo ku dhiirrigelinta alaabadaada khadka tooska ah ee internetka iyada oo aan lahayn kakan kale.
Khabiirka Dhismaha Websaydhada ayaa bilaabay hage cusub oo macluumaad ah, Sida loo Bilaabo Ganacsi daadinta. Tilmaan -bixiyaha macluumaadka wuxuu adeegsadaa tirakoobkii ugu dambeeyay iyo cilmi -baaris ku saleysan aragtida laga helay khubarada Dropshipping ee aan la hadalnay. Waa tan waxa ku jira:
Waa maxay Qulqulka dhibku iyo sida ay u shaqeyso
Tirakoobkii ugu dambeeyay ee Saameyntiisa
5ta talaabo ee lagu bilaabayo ganacsi daadinta
3 Qalad oo Caadi ah oo Qubashada ah Si Looga Fogaado
Khuraafaadyada Busting Caadiga ah
Faa'iidooyinka ugu waaweyn iyo Qasaarooyinka daadinta
Waxay Ku Dhamaatay Weydiinta: Miyaad Tahay Inaad Daaro
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyadayda xiriirka la leh aaladaha lagu xusay maqaalkan.
Tags: joojintadaadinta infographictirakoobka daadintainfographicdegel-dhismexpert